Jereo izay ho hitanao ao Peratallada | Vaovao momba ny dia
Peratallada dia tanàna kely miendrika medieval any amin'ny faritanin'i Girona. Ity tanàna ity dia an'ny tanàna Forallac any Bajo Ampurdán. Nambara izy io ho toerana manan-tantara ara-javakanto manan-tantara, izay tsy mahagaga, satria izy io dia iray amin'ireo tanàna voatahiry antonontonony tsara indrindra eran'i Catalonia.
Androany ho hitantsika ny fomba a fitsidihana ny tanànan'i Peratallada any Catalonia. Tanàna kely sy mandray olona izy io, izay tsy mamela ny olona tsy hiraharaha mihitsy, satria ny olona iray dia mieritreritra fa efa niverina tamin'ny lasa izy. Ao anatin'ity ensemble ity dia misy tsangambato manan-tantara izay mendrika jerena tsara.
1 Mankanesa any Peratallada
3 Ny arabe ao an-tanàna
4 Fiangonan'i Sant Esteve
6 Ny Tilikambon'ny ora sy ny tilikambo boribory
Mankanesa any Peratallada
Ity tanàna ity dia miorina amin'ny faritra Costa Brava, afovoan-tany. Avy amin'ny Vulpellac dia tratry ny GI-644 raha avy any Girona isika. Raha avy any amin'ny faritra amorontsiraka isika, toa an'i Palamós, dia tsy maintsy mamono ao Sant Climent de Peralta isika. Tokony ho mailo ianao, satria mora ny mandingana ny tanàna, satria kely izy io. Ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana GPS foana. Rehefa tonga ao an-tanàna any toeram-piantsonan'ny fiara telo manodidina. Marihina fa mandritra ny vanim-potoana avo sy amin'ny faran'ny herinandro dia mandoa vola ireo fiantsonan'ny fiara ireo, izay manondro fa tanàna mpizahatany tokoa izy tamin'izany andro izany.
Ity tanàna ity dia manana anarana izay midika hoe 'vato voasokitra', ary io dia araka ny fahitanao ny tontolo iainana, ny vato dia iray amin'ireo singa lehibe izay nampiasaina hanamafisana sy hampiakarana ny tanàna. Zara raha misy mponina 100 ao aminy, ka azontsika atao ny mieritreritra fa toerana mangina be izy io mandritra ny taona. Ny tena marina dia mandritra ny herinandro sy amin'ny vanim-potoana ambany dia toerana mety izy io, satria vitsy ny olona mitsidika azy, fa amin'ny faran'ny herinandro sy mandritra ny fahavaratra dia mihamaro ny mpitsidika, izay manala ny mahasarika avy amin'ity tontolo medieval ity. . Izany no nanolorana azy ireo hitsidika azy io rehefa mahita olona vitsivitsy isika. Ny zavatra mahaliana dia ny eto amin'ity tanàna ity dia voarara ny fananganana fananganana vaovao na dia talohan'ny nanambarana azy ho toerana manan-tantara-kanto, izay manondro ny maha-zava-dehibe ny fomban-drazana sy ny tantaran'ny tanàna ho an'ny mponina ao aminy.
Ny arabe ao an-tanàna
Ny iray amin'ireo zavatra hita eto amin'ity tanàna ity dia tsy isalasalana fa ny lalàny. Làlana ety amin'ny fitanana medieval, cobbled ary tsara tarehy. Mampahatsapa antsika amin'ny vanim-potoana hafa izy ireo ary azonay an-tsaina ny tantaran'ireo tovovavy sy tompokolahy. Azontsika atao ny mamakivaky ny arches, mahita ny fananganana tsara tarehy ary mankafy ny fiakaran'ny voaloboka amin'ny rindrina maro, manome ny rivotra iainana ny angano izay mandresy ny olona rehetra mitsidika an'i Peratallada.
Fiangonan'i Sant Esteve
Ny fiangonana Romanesque taloha any Sant Esteve dia eo ivelan'ny rindrin'ny tanàna. ATSINANANA ny tempoly dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary eo am-paran'ny fitsangatsanganana mahafinaritra miaraka amin'ireo hazo izay manamboatra azy io haka sary tena tsara an'ny tontolo iainana. Ny misongadina dia ny endriny lehibe misy andohalambo maranitra, varavarankely raozy kely ary varavarana misy andohalambo semi-circular. Izy io dia endrika somary tsotra, miaraka amin'ny tsipika mahitsy nefa tsara tarehy tsara. Ny fombany dia voafaritra ho tara Romanesque Empordà. Ny zavatra ratsy amin'ity fiangonana ity dia ny tsy ahafahanao mitsidika ny atiny raha tsy mankany amin'ny biraon'ny fizahan-tany izahay mba hanao fitsangatsanganana. Tsy dia hita loatra ny ao anatiny, satria tsy vita izy io ary tamin'ny Ady an-trano dia nesorina daholo ny haingon-trano, saingy misy toerana fanaovana batemy taloha sy fasan'i Baron Gilabert de Crüilles amin'ny fomba gôtika.
Ny antontan-taratasy voalohany miresaka momba ity trano mimanda ity dia tamin'ny taona 1065, saingy toa io fivoarana io dia avy amin'ny fivoaran'ny fananganana izay mbola taloha kokoa aza, nahatratra ny fotoanan'ny Romana. Ao amin'ny trano mimanda dia afaka mahita singa ny Romanesque, Gothic ary fomba manaraka. Miditra ao amin'ny Plaça del Castell izy io, izay tsy maintsy ho ilay kianja filalaovana taloha. Novaina ho trano fandraisam-bahiny lafo vidy izy io ary tsy azo tsidihina izao, na dia nahazo alalana aza ny fitsidihana voalohany.
Ny Tilikambon'ny ora sy ny tilikambo boribory
El trano mimanda dia nohamafisin'ny rindrina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy sisa tavela aminy fa ny sasany amin'ireo tilikambony dia voatahiry. Ny iray amin'izy ireo dia ny Torre de las Horas, izay famantaranandro ampahibemaso tao an-tanàna, ary misongadina noho izy manana andohalambo eo an-tampony. Ny Circular Tower dia io endrika io ary misy loaka amin'ny fitaovam-piadiana.
Ity angamba ilay toerana be sary indrindra ao an-tanàna, noho izany dia ilaina ny mijanona. Izy io dia manana andohalambo vato tsara tarehy, rindrina misy ivy eo ivohony sy arabe mideza ary matevina. Ny toerana mety indrindra haka sary farany ao an-tanànan'i Peratallada.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Girona » Peratallada, inona no ho hita
Mandehana mamaky an'i Orbaneja del Castillo